Kedu ka esi zere corrosion nke igwe anaghị agba nchara igwe ịsa ahụ? - Akụkọ - Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd
Kedu ka esi zere corrosion nke igwe anaghị agba nchara igwe ịsa ahụ?
Ekwenyere m na ụlọ ịsa ahụ onye ọ bụla nwere igwe kpo oku mmiri. Enwere isi ihe abụọ nke ikpo ọkụ mmiri makammiri ịsa ahụ, otu bụ PVC na nke ọzọ bụ igwe anaghị agba nchara. N'ime ha, igwe anaghị agba ncharammiri ịsa ahụọtụtụ mmadụ na-amasị ya n'ihi ịdịte aka na ịma mma ha. N'ihi na iru mmiri dị n'ime ụlọ ịsa ahụ dị oke elu, elu nke eriri igwe anaghị agba nchara na-enwekarị nchara, nke na-eme ka gloss nke elu eriri ahụ belata, nke na-emetụta mmetụta ịsa ahụ nke ndị mmadụ. Kedu ka esi zere nchara nchara? N'ezie, ọ bụrụhaala na a na-edozi ya nke ọma, ọ nwere ike belata nke ukwuu Ihe omume nchara a.
Nguzogide corrosion nke igwe anaghị agba nchara ịsa ahụ nwere njikọ chiri anya na ọdịnaya chromium dị na ihe ya. Mgbe ego mgbakwunye chromium dị 10.5%, nguzogide corrosion nke igwe anaghị agba nchara ga-abawanye nke ukwuu, mana ọdịnaya chromium ka mma adịghị mma, ọbụlagodi ọdịnaya chromium na ihe igwe anaghị agba nchara dị oke elu, mana arụmọrụ nguzogide corrosion agaghị abawanye. .
Mgbe ị na-ejikọta igwe anaghị agba nchara na chromium, ụdị oxide dị n'elu na-agbanwekarị ka ọ bụrụ oxide elu nke yiri nke chromium dị ọcha na-emepụta, na chromium oxide a dị ọcha nwere ike ichebe elu igwe anaghị agba nchara. Mee ka mmetụta mgbochi oxidation ya sie ike, mana oyi akwa oxide a dị oke mkpa na ọ gaghị emetụta gloss nke elu igwe anaghị agba nchara. Otú ọ dị, ọ bụrụ na oyi akwa mkpuchi a mebiri emebi, elu igwe anaghị agba nchara ga-emeghachi omume na ikuku iji rụkwaa onwe ya ma mepụta ọzọ Passivation film na-echebe elu igwe anaghị agba nchara.
Mgbe anyị na-azụta igwe anaghị agba ncharammiri ịsa ahụ, anyị nwere ike iji ndị hoses nke elu ha e chrome-plated. Ọrụ mgbochi nchara na mgbochi corrosion nke ụdị ụgbụ a dị elu karịa nke hoses na-abụghị chrome-plated. N'oge a na-eji ya eme ihe, ịkwesịrị ịṅa ntị ka ị ghara ịgbasa ngwọta acid na sooks dị ka o kwere mee.
Nke gara aga:Otu esi ahọrọ isi ịsa ahụ
Osote:Ebe azụta atọ nke eriri ịsa igwe igwe